विश्व घटनाक्रमका यी दुई कुरा साकार भएको भए सिंगो भारत नेपालको अधिनमा हुन्थ्यो ! « Surya Khabar
विश्व घटनाक्रमका यी दुई कुरा साकार भएको भए सिंगो भारत नेपालको अधिनमा हुन्थ्यो !
काठमाण्डौ । नेपालमा ब्रिटिस गोर्खा भर्ती केन्द्र र त्यहाँ जाने युवाहरुको विषयलाई लिएर विभिन्न बहसहरु हुने गरेका छन् । नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भिमसेन थापा र कुशल शासक जंगबहादुर राणाले त्यसको विरोध गरेपनि राणाकालका पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरु वीरशम्शेर र चन्द्र शम्शेरहरुको उदारवादी नीतिले गर्दा गोर्खा भर्ती केन्द्रमा नेपाली युवाहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहँदै आएको पाइन्छ ।
इतिहासविद प्राध्यापक डा।नारायणप्रसाद संग्रौला लेख्छन्, ‘पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालको बेलायतसँगको सहभागितालाई लिएर जर्मनी निकै रिसाएको थियो । नेपालसँग परम्परागत सत्रुका रुपमा रहेको बेलायतसँगै टाँसिएको देखेर जर्मनीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र भारतका अंग्रेज विरोधी नेताहरुले नै नेपालका राजालाई अंग्रेज भगाउ आन्दोलनको नेतृत्व लिन आग्रह गरे । तर त्यसबेलाका नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले भने त्यसको साटो अंग्रेजहरुको गुलामी गरिरहे र उल्टै बेलायतको पक्षमा जर्मनीको जासुसी गरिरहे ।
सन् १८८८ मा जर्मनी, अष्ट्रिया र इटली एकातर्फ र बेलायत, फ्रान्स र रुसको अर्कोतर्फ भएको एलायन्स निर्माण भएको थियो । एलायन्स जारी रहेकै बेला अर्थात २६ वर्षपछि अष्ट्रियाका राजकुमार र उनकी पत्नीको बोस्नियामा भएको हत्याको विषयलाई लिएर सन् १९१४ जुलाई २४ मा प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात भएको थियो ।
यस्तो थियो जर्मनले नेपालाई पठाएको पत्र !
यद्यपि, पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मन एलाइन्सको हार भयो र बेलायत पक्षले जित्यो । त्यसको केही वर्षपछि मात्र भारतबाट अंग्रेजहरु बढारिएका थिए । नेपालको ब्रिटिस गोर्खा भर्ती केन्द्रमा जाने युवाहरुको क्रम भने अहिले पनि जारी छ ।